Arahabaina Laura Ary Mirary Soa Eli! Fiovàna Ekipa Mpitantana ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Arahabaina Laura Ary Mirary Soa Eli! Fiovàna Ekipa Mpitantana ao Amerika Latina
Voadika ny 16 Febroary 2018 5:50 GMT
Laura Vidal (L) tao amin'ny Fihaonamben'ny Global Voices tany Cebu tamin'ny taona 2015, Filipina sy Elizabeth Rivera (R) tao amin'ny fihaonamben'ny Global Voices tao Kolombo tamin'ny taona 2017, Sri Lanka. Sary an'i Jer Clarke. CC-BY-NC.
Laura Vidal, izay nankalaza ny fitsingerenan'ny faha-10 taona niarahany tamin'ny Global Voices, no hany tokana tonian-dahatsoratray ankehitriny ho an'i Amerika Latina sy ireo firenena miteny Espaniola. Ny mpiara-mamoaka lahatsoratra taminy, Elizabeth Rivera, dia nametra-pialàna tamin'ny volana lasa teo mba hisahana ny asan'ny Talen'ny Fifandraisana ao amin'ny IFEX, fikambanana iray mpiara-miasa izay ankafizinay sy tohananay.
Arahabaina Laura ary mankahery anao izahay, Elizabeth!
Faly izahay mahita ireo zotra voasaintsaina tsara hitarihan'i Laura ny GV ao Amerika Latina sy ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny Espaniola ary mankasitraka izahay mikasika ny fientanam-po, ny fahaizana amam-pahalalàna ary ny hatsaram-panahy izay nentin'i Elizabeth tao amin'ny efitrano fanoratana tamin'ny naha-tonian-dahatsoratra azy nandritra ireo roa taona farany.
Tamin'ny taona 2014, nanatevin-daharana ny ekipanay tamin'ny fitantanana an'i Amerika Latina ho toy ny mpitantana vondrom-piarahamonina i Laura, avy eo nahazo ny toerana mpiara-mamoaka lahatsoratra tamin'ny taona 2015. Mpiara-mamoaka lahatsoratra tao amin'ny faritra niaraka tamin'i Elizabeth Rivera izy nanomboka ny taona 2016.
Mahavariana ny lalana narahan'i Elizabeth tato amin'ny Global Voices: nanatevin-daharana anay amin'ny maha-mpandika lahatsoratra izy taorian'ny naha-voasarika azy tamin'ny fandrakofana tsara indrindra nataonay ny Lohataona Arabo tamin'ny taona 2011, nanohy nanoratra tantara manan-danja anjatony avy any amin'ny faritra izy, ary nony farany nanao dingana goavana roa taona lasa izay, avy amina lalan'asa tena samihafa, ary nanatevin-daharana anay ho tonian-dahatsoratr'i Amerika Latina. Izy no nahafantaranay ireo toromarikao vitsivitsy mikasika ny tsenam-barotrareo teny an-dalana teny. Eli, naka ny fahalianana sy fahasahiana ianao, izay tena omenay lanja ato amin'ny GV, ho amina dingana manaraka.
Tamin'ny fiarahana tamin'i Laura, nitàna anjara toerana lehibe i Elizabeth teo amin'ny fampiroboroboana ny rantsana vondrom-piarahamonina lehibe indrindran'i GV. Ary ny fomba fijeriny manao izay hampilendalenda anao hatrany tamin'izay fandrakofana ireo tantara manan-danjan'ny faritra dia nanome ohatra mafonja ho an'ireo sisa ambiny mpanoratra. Teo ambany fitantanan'i Eli sy Laura, Marobe ireo tantara mikasika faritra iray novokarin'i Amerika Latina! Ny asa niarahan'i Elizabeth tamin'i Laura tamin'ny famokarana ny fandrakofanay manokana an'i Venezoelà sy ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety tao Meksika dia hijoro eo foana ho antsika ary tena mankasitraka izahay! Hijanona ho tonianay hatrany i Eli ao amin'ny Twitter, miaraka amin'i Asteris Masouras.
Laura, voalohany indrindra, arahaba tratry ny faha-10 taona nirahana tamin'i GV! An-dalana ny fety iray. Laura, miray fo foana ianao amin'ny fombanao handrakofana ireo tantara tsy dia voalaza loatra avy ao amin'ny faritra sy ny fiatrehana ireo fanamby sasantsasany izay mety ho azo apetraky ny rafitra itsinjaram-pahefana sy virtoaly nataontsika. Matetika izahay miverina mamaky ity fifanakalozan-kevitra mahafinaritra mikasika ny fanoratana, nifanaovanao sy Lova, tonian-dahatsoratry ny mpiteny sy mpampiasa teny frantsay, ity.
Sambatra izahay manana olona misy fangorahana sy fijery tsy manam-paharoa toa an'i Laura, eo amin'ny fitarihana ny efitrano fanoratana. Nandalo tetezamita mahatalanjona teo amin'ny mpandika lahatsoratra sy mpanoratra i Laura tamin'ny fanoratana ireo tantara maneho ny maha-olombelona; ho an'ilay mpandrindra ny vondrom-piarahamoninay voalohany, izay nanokafany lalana sy nanombohany ireo fihaonana madinika virtoaly ; tonia mpiara-miasa tamin'i Mary Aviles, avy eo Elizabeth Rivera; ary ankehitriny tonian-dahatsoratra ho an'ny faritra manontolo!
Resy lahatra izahay fa i Laura dia hanohy hikolokolo vondrom-piarahamonina mahitsy sy mientanentana kokoa amin'ny fomba misongadina, amin'ny famokarana tantara maro izay manohana ny asanay, amin'ny fanampiana hanatratra ny tanjonay tsy dia tena tsotra loatra amin'ny fanaovana ny maro amin'izao tontolo izao hitovy kokoa amin'ny GV!
23 ora izayTaratasim-baovao